नेताहरूलार्इ प्रदेशी युवाको खुला पत्रः जनताले जितुन्……. – Halkaro
नेताहरूलार्इ प्रदेशी युवाको खुला पत्रः जनताले जितुन्…….
प्रकाशित मिति : २०७४, ७ जेष्ठ आईतवार May 26, 2017
प्रिय नेता गण,
नेता ज्यु, जितकाे ह्याङ्गअाेभरले छाेडेकाे त छैन हाेला तर, देशमा भैरहेकाे घटनाक्रमले केहि नलेखि बस्नै सकिन । हुन त अबिर जात्रा गरेर सकिसकेकाे पनि छैन हाेला । वल्लाे र पल्लाे टाेलबाट सम्मानका लागि बाेलावटहरु अाईनै रहेकाे हाेला । यसैबिचमा तिमिहरुकाे याे खुसीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाएका लाखौं परदेशी युवाहरुकाे तर्फबाट बधाई छ । अहिले तिमीले जितेकाे खुसिमा अबिर जात्रा गर्दै छाै, अबकाे ५ बर्षमा जनताले जितेकाे महशुस गर्ने अवस्था अाअाेस्, शुभकामना ।
दशकाैं पछिकाे स्थानीय निर्वाचन पहिलाे चरण सम्पन्न भयाे । देशमा एक प्रकारकाे उत्साह छ । केही हदसम्म भएपनि समृद्धिकाे अाशा अाम नेपालीले गरेका छन् ।
पहिलाे चरणकाे निर्वाचनबाट ३४ वटा जिल्लाहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधि छनाेट हुने क्रममा छ । निर्वाचन सम्पन्न सबै क्षेत्रकाे परिणाम नअाईसकेका कारण जारी छ भन्दा अतियुक्ति नहाेला । प्रारम्भिक चरणमा देखिएकाे परिणामहरु उति साराे भयंकर र अकल्पनीय पनि भएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा अाफुलाई ठुला भनिएका तिमीहरू नै अग्र स्थानमा छाै । यसपटककाे निर्वाचन यसकारण पनि उत्साहपुर्ण रह्याे, कि, जनताले निर्धक्क अाफ्ना उम्मेदवारलाई मत दिए । पहिलो संबिधान सभाकाे चुनावमा जस्ताे माअाेबादीले हातियारकाे दम्भबाट चुनाव जिते भन्ने अाराेपहरु लागेनन् । र अन्य दल यसै बाहनालाई काखी च्यापेर अाफ्नाे पुच्छर बचाउने अभियानमा लागिरहनु परेन । उतिबेलाकाे जनादेश र अहिलेकाेे जनादेशमा फरक केही छैन् ।
प्रमुख दलहरु मिलेर शासन गर, र मुलुकलाई सम्बृद्दिकाे बाटाेमा अघि लैजाउ भन्ने नै हाे । जनता हिजाे पनि यहि चाहान्थे अाजपनि उहीँ चाहान्छ । जनताले सबैलाई समान अवसरहरु दिदैं छन् । पहिलो संबिधान सभा चुनावमा माअाेबादीलाई पहिलाे शक्ति बनाउदैं नेतृत्वको लागि जनताबाट अाव्हान भयाे, दाेस्राे पटककाे निर्वाचनबाट त्याे अवसर कांग्रेसले पाए, र अहिलेकाे प्ररम्भिक नतिजाहरुले एमालेलाई त्याे अबसर दिईएकाे छनक प्राप्त भएकाे छ । खासमा नेपाली जनता यसप्रकारकाे निर्णयलाई तिमिहरुले बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा, यी तीन दलकाे बिकल्पहरु साेच्न नेपाली जनता बाध्य नहाेला भन्न सकिन्न । अहिले निर्वाचनबाट जनताले तिमिले भाेट माग्न जाँदा भनेका ठुला सपनाहरुमा विश्वास गरेका छैनन् । उसलाई न फ्रि वाईफाई न, ५ हजार डलर अाय, नत ठुल्ठुला अाश्वासन चाहेकाे छ । जनताले चाहेकाे यति हाे कि समृद्धिका अाधारहरु तयार हुन् । निकै कम पारिश्रमिकमा बेचिएका जनशक्तिको अाफ्नै देशमा उपयाेग हुन् । साधान र श्राेतहरुकाे भरमजबुुर उपयाेग हुन, भन्ने चाहान्छन् । तिमीहरूले भने जस्ताे ठुला ठुला सपनाहरुलाई जनताले बुझेका छन् ।
उनिहरु यतिबेला पानी जहाजमा चढेर फ्रिकाे वाईफाई चलाउने सपनालाई थाति राख्दै अाधारभुत अावश्यकता परिपुर्ति र विकासकाे अाधारहरु स्थापना हाेस् भन्ने चाहना राखेका छन् । स्थायी शान्ति र विकास पहिलाे एजेन्डा जनताकाे हाे । भाेट माग्नका बनाएका मिठा र सुन्दा पनि काल्पनिक लाग्ने अाश्वासन हाेईन काम गर्ने ईच्छा शक्ति भएकाे नेतृत्व चाहिएकाे छ । यस्ताे र उस्ताे बनाउछु भनेकाे दशकाैंसम्म पनि अाधारहरु खडा नहुंदा जनतामा नैरश्यता छ । अब बाेलीमा हाेईन व्यवहारमा नै काम गर्ने वास्तविक जनप्रतिनिधिकाे खाँचाे छ । यदि याे समयलाई चिन्न सके, स्वर्णिम युगकाे सुरुवात यहिबाट र अाजैबाट हुनेछ । हालसम्मका भुत भैसकेका राजनितिक घटना क्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् कि, तिमीहरुसंग ईच्छा शक्ति नै छैन । बाध्यात्मक अवस्था बाहेक अरु कुनै विकासका एजेन्डालाई अघि बढाउने संकल्प नहुदाँ तिमीहरुप्रतिकाे विश्वास घट्दाे क्रममा छ । अाफुले गरे ठिक र अरुले गर्दा बेठिक देख्ने अाँखा अब पुरानाे भईसके । समयमा नै यसकाे उपचार नगरे धाेका पाउने निश्चित छ । यस्ताे राजनितिकाे अन्त्य सबै नेपाली चाहान्छ । विकासका लागि पर्याप्त बजेट नै अन्तिम सत्य हाेईन् । तिमीहरु दिलदेखि अाव्हान गर खाडी तथा अन्य मुलुकमा पसिना बगाई रहेका युवाहरु देश विकासमा श्रमदान गर्न तत्काल अाउन तयार छ । दृढ ईच्छा शक्तिले हर काम सफल बनाउछ भन्ने उदाहरण हाम्रै देशमा देखिसकेका छन् । धुर्मुस सुन्तली र धदिङका दिनेश तामाङलाई सम्झिएर काम गराैं, नेपाल नेपालीले नै बनाउन सम्भव छ ।
सिर्जनात्मक काम गर्ने युवालाई काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिए पुग्छ । कुनै सफल काम गर्न सक्नेलाई रातारात अाफ्नाे पाेल्टा पार्दै भाेट बढाउने घृणित काम अाजै बाट बन्दा गर । गर्न चाहानेलाई प्राेत्साहन गर । समृद्धिकाे सपना जनताका हुन् । सक्छौ भने सपना पूरा गर्न नेतृत्व गर, नत्र गर्नेहरुलाई हताेत्साहित नगर । निश्चित स्वार्थ सिद्धका लागि बाेलिदिएर बिकास हुदैन् ।
अाफु राम्रो र अरु अराजक र अराष्ट्रिय देखेर समृद्धि सम्भव छैन्, । साँच्चै तिमिले भनेका कुराहरु प्राप्ति गर्ने चाहाना भए, त्यसका अाधारहरु जनताका सामु ल्याउनु जरुरी छ । जसमा हर अबस्थामा तिम्रो साथ चल्न जनता तयार छन् । तिम्रा घाेषणा पत्रमा भएका सबै बकवास बिषय हाेईन्, साधारण जनताकाे न्युनतम अावश्यकता पूरा गर्दै विकासमा गतिविधिमा समेट्नु तिम्राे खास जिम्मेवारी हाे । अंकगणितमा धेरथाेर मत जनताले सबैलाई दिएका छन् । यसकाे अर्थ सबै मिलेर काम गर्नु भन्ने हाे । दुई मत ज्यादा ल्याएर जित्ने दम्भ र कम मत पाएर हार्नेकाे कमजाेर मानसिकता अाजै त्याग गर्नु पर्छ । दम्भ पुर्ण राजनितले विकास हाेईन विनास गराउछ ।
तिम्राे पार्टीको धारणाले के भन्छ हाेईन जनताकाे चाहाना के भन्ने प्रमुख बिषय हाे । तिम्रो राजनितीक अास्थाका अघि जनमत प्रधान हुन् ।
उहीँ परदेशी युवा
← जेठ ३१ पछि मात्र संविधान संशोधन
भीष्मको पाइला पाइला →
इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा क्रुसको गोलको मद्दतले जर्मनीको पहिलो जित
मेक्सिकोको लगातार दोस्रो जितः कोरिया २-१ ले पराजित
ट्युनिसिया माथि वेल्जियमको सानदार जितः लुकाकु गोल्डेन बुटको दौडमा रोनाल्डोसँगै
गर्मी छल्न लामो झरना